China Elevator Counterweight miaraka amin'ireo fitaovana isan-karazany sy mpamatsy | Tianhongyi
3.Omeo ny sakana Counterweight Block, Steel Plate Counterweight Block, Cast Iron Counterweight Block
4.Manome izay tadiavinao izahay, fifaliana azo itokisana! Tsy ho diso fanantenana mihitsy aho!
5.We koa afaka manamboatra mifanaraka amin'ny zavatra takinao.
Ny fiasan'ny counterweight dia ny fandanjana ny lanjan'ny fiara. Misy fifandraisana tady tariby mitazona eo amin'ny fiara sy ny endriny mifanohitra. Ny tady tariby mitaingina dia entin'ny fikorontanana ateraky ny fitomboan'ilay herisetra sy ny lanjany hampihetsika ny fiara miakatra sy midina. Ho an'ny ascenseur firafitra fanamafisam-peo, ny counterweight dia tsy tokony ho mavesatra loatra, ary koa tokony ho maivana loatra. Tokony hifanaraka amin'ny lanjan'ny mpandeha sy ny sisin'ny fiara izany. Izany hoe, ny coefficient fifandanjan'ny ascenseur dia tokony eo anelanelan'ny 0.4 sy 0,5 araka ny fitsipika, izany hoe ny lanjan'ny counterweight sy ny lanjan'ny fiara miampy 0,4 ka hatramin'ny 0,5 heny ny valin'ny valin'ny ascenseur.
Ny counterweights misy ny ascenseur dia mizara ho counterweights vy, counterweights mitambatra ary counterweights lovia vy. Anisan'izany, ny vy mpanohitra vy dia vita amin'ny vy atsoloka, ary somary avo ny vidiny; ny counterweight compteite dia vita amin'ny ravina vy 0.8mm, ary ny mpameno dia feno simenitra, vy, vovoka vy ary rano milanja ao anaty akorany amin'ny alàlan'ny fikolokoloana. ; Ny lozisialy vy lovia dia tapaka amin'ny takelaka vy, ary nofafazana teny ivelany, miaraka amin'ny loko sy hateviny isan-karazany manomboka amin'ny 10mm ka hatramin'ny 40mm. Ny sandany no avo indrindra amin'ireo mpanohitra. Ny counterweight vy dia manana hakitroka avo sy kely habe, izay afaka mampihena be ny haben'ny counterweight sy ny haavon'ny counterweight, izay manampy be tokoa amin'ny fampihenana ny haben'ny hoistway sy ny haavon'ny tampony, ary ny vidiny koa avo. Eo ambanin'ny habe mahazatra dia voatokana ny haben'ny ambim-bava, ary azo ampiasaina ny counterweight mitambatra, na ny mifangaro sy ny lovia vy dia azo afangaro sy ampifanarahana, izay afaka mampihena ny vidiny.
Teo aloha: Rindrambaiko avo lenta ho an'ny tahan'ny fifandanjana samihafa
Manaraka: Tady avo lenta avo lenta
Kabinetra fanaraha-maso ny ascenseur
Cabina fitaratra avo